Hlola i-Ottawa, Canada - World Tourism Portal
Hlola i-Ottawa, Canada
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Ottawa, eCanada
Ongakwenza e-Ottawa, Canada
Uhambo losuku kusuka e-Ottawa
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Ottawa
Bukela ividiyo mayelana ne-Ottawa
Hlola i-Ottawa inhlokodolobha ye Canada. Idolobha lisendaweni eseceleni kwe-Ontario yoMfula i-Ottawa, maqondana neGatineau, Quebec. Inani labantu base-Ottawa abayizigidi ezingama-1.4 kanti njengamanje lingokwesithupha ngobukhulu eCanada, kanti lesibili likhulu e-Ontario ngemuva Toronto.
Uyingqayizivele njengenhloko-dolobha yaseNyakatho Melika, leli dolobha linezezilimi ezimbili. IsiNgisi siwulimi lokuqala lwesibalo sabantu abaningi, kepha isiFulentshi siwulimi lokuqala lwenombolo ethile. Abasebenzi ezitolo eziningi nasezitolo zokudlela bakhuluma kahle futhi, ngokuvamile, ukukhuluma ngezilimi ezimbili kuvamile.
I-Ottawa iyikhaya lamasiko amaningi omhlaba njengoba izinkulungwane zabokufika abavela emhlabeni wonke manje zibiza i-Ottawa ngokuthi ikhaya. Leli dolobha cishe laziwa njengenhloko-dolobha yesizwe kepha selibe elinye lamadolobha akhula ngokushesha eNyakatho Melika ngenxa yomkhakha webhizinisi eliphakeme.
I-Ottawa yaqala njengedolobhana lamapulangwe elithobekile, ngaleso sikhathi elalibizwa ngeBytown, eliqanjwa uColonel John By. UColonel Ngokubheka ukwakhiwa kweRideau Canal, manje esiyi-UNESCO World Heritage site, eningi eyenziwe ngesandla, phakathi kwe1826 ne1832. Kwakheka izindunduma zamapulangwe eceleni komfula i-Ottawa maphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye futhi lokho kwaletha umsebenzi nengcebo kubantu abakhulayo. Isikhungo sokusebenza ngalesosikhathi, sasiyimakethe yeByWard. Ngenkathi kuseyisikhungo sobusuku bokuhlala kwedolobha, sishintshe ngokwazisa kusuka ezinsukwini ezinzima nezishubile zangaphambi kokuqala kwezindawo zokudayisa izindlu zemigwaqo kanye nemigwaqo yokudlela.
Namuhla, imikhakha emikhulu yezomnotho ngukusebenza komphakathi, ukuhamba nezokuvakasha kanye nomkhakha wezobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme. I-Ottawa ihlale ngokuziqhenya idolobha eliluhlaza okotshani futhi itholakala lapho kuhlangana khona imifula emithathu (i-Ottawa, i-Rideau neGatineau) kanye nomsele waseRideau. Izakhamizi eziningi zisebenzisa njalo amapaki ase-Ottawa nezikhala eziluhlaza, imigwaqo ehamba ngamabhayisekili nemizila ehamba ezweni lonke. Izinto eziningi ezikhangayo kuzwelonke zitholakala e-Ottawa: ePhalamende Hill; Umtapo Wezincwadi Kazwelonke kanye Nezindawo Zokugcina umlando Igalari Yesizwe; kanye namaMnyuziyamu Wezimpucuko, Ukuthatha Imizwelo, Imvelo, Impi neSayensi neTekhnoloji.
Isikhumulo sezindiza esisha esakhiwe kabusha futhi sanwetshwa iMacdonald-Cartier International Airport yisikhumulo sezindiza esikhulu sase-Ottawa ngokufika njalo nokuphuma emadolobheni amakhulu eCanada nasemadolobheni amaningi aseMelika.
Ukupaka ezindaweni eziningi ezithandekayo kuyinto elula, yize ukupaka emgwaqweni ezindaweni ezisezansi kwesinye isikhathi kuba yimali ekhokhwayo. Uma ushayela edolobheni ngempelasonto, ukupaka kumahhala egalaji eWorld Exchange Plaza. Kukhona amasango okuya egalaji kuwo womabili uMetcalfe Street naku-Queen Street. Endaweni yokupaka imigwaqo nayo imahhala phakathi nezimpelasonto futhi kulula ukuyithola. Imephu iyasebenziseka uma uzobe ushayela uzungeze indawo yedolobha njengoba imigwaqo eminingi isendleleni eyodwa futhi isivakashi esingaphezu kwesisodwa sikhononda ngokuzulazula enkabeni yedolobha.
Izinkampani ezinkulu kakhulu zokuqasha izimoto zinamahhovisi amaningana e-Ottawa wonke amelwe yedolobha futhi esikhumulweni sezindiza.
I-Ottawa idolobha elihle ongalihlola ngezinyawo. Ngemigwaqo ehambisana nabahamba ngezinyawo nobuningi bezinto ezikhangayo, imoto iyabiza futhi ayidingi ingxenye enkulu. Indawo enhle kakhulu yokuqala noma ikuphi ukuvakasha kwe-Ottawa yi-Capital Information Kiosk, etholakala ku-111 Albert Street e-World Exchange Plaza. Banamamephu nezincwajana zezindawo eziheha izivakashi kakhulu e-Ottawa, eziningi zazo ezihamba ibanga lokuhamba.
Izindawo ezihamba ngezinyawo ezidumile, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zasentwasahlobo kanye nehlobo, ziyimigwaqo ehlukahlukene eMakethe yaseByWard. Umgwaqo iSpark, ongena phakathi kwedolobha ulingana nePhalamende izakhiwo, uyindawo edumile yokuhamba ngezinyawo phakathi kwamabili nobusuku, ikakhulukazi ezinyangeni zasentwasahlobo nasehlobo.
Izinkambo zokuhamba eziqondisiwe ziyatholakala nama-Ottawa Walking Tours nabanye abanjengo-Around About Ottawa. Kuningi kakhulu ongakubona futhi ukwenze enhlokodolobha yeSizwe ukuthi umhlahlandlela wokuvakasha uzothuthukisa isikhathi nesivakashi somuvakashi kulomuzi omuhle. Konke ukuvakasha kufaka umlando othile neminye imininingwane ye-trivia engaziwa kakhulu.
Khumbula, i-Ottawa idolobha elinesimo sezulu esikhona ngempela izwekazi. Ebusika, isikhumba esivele ngaphandle singahola ngemizuzu noma ngaphansi, ngakho-ke ungqimba engutsheni bese uzivikela ngokugqoka isigqoko (i-toque noma abazingeli cap), amagilavu ​​namabhuzu. Ngaphandle kokusondela eNorth Pole kune-ikhweyitha, izinga lokushisa lomswakama kanye nomswakama lingaphakama ngokucindezela, ngakho-ke ulethe amanzi uma wenza noma yisiphi isilinganiso sokuhamba noma ngebhayisekili. Uma usezindleleni zomphakathi eduze komsele noma umfula, kunemithombo yokuphuza ukugcwalisa amabhodlela akho. Futhi, ungakhohlwa ukuphikisana nomiyane.
Kukhona izinketho ezimbalwa zokuqasha amabhayisekili edolobha, futhi njalo ungaletha ezakho. I-Ottawa itholakala kakhulu kubahamba ngamabhayisekili. Futhi, ungafuna ukuqala ngokushesha maqondana nePhalamende Hill ukuze uthathe imephu yendawo noma uthole ukuqasha ngebhayisekili. Ukuhamba ngebhayisikile ezikhangisweni eziseduzane nedolobha lase-Ottawa kuyindlela enhle yokuhamba, kepha unganaki uhlangothi lweGatineau lomfula. Zinokuheha okuningana ngasemfuleni kufaka iMnyuziyamu Wempucuko futhi uma ufuna ukwelula imilenze yakho, iGatineau Park inezindlela eziningi ezinhle zokuhamba ngamabhayisekili.
Idolobha lihlukaniswe ngaphesheya kwe-170km yemigwaqo yamabhayisekili, amanye awo abelwa abashayeli bezimoto, kanti amanye abiwa nabahamba ngezinyawo. Idolobha lihlinzeka ngemigwaqo esebenzisana nezinye amamephu. Ngaphezu kwalokho, leli dolobha livala ama-50 km wemigwaqo eya ezimotweni njalo ngeSonto phakathi nehlobo ukusuka eVictoria Day kuya kuLabour Day evumela ukuhamba ngamabhayisekili, ukuhamba ngomugqa nokuhamba kulezi zindlela zomgwaqo. Imigwaqo ebibambe iqhaza e-Ottawa yile: uSir John A MacDonald Parkway (ogudla uMfula i-Ottawa), uColonel By Drive (eceleni kweRideau Canal), kanye neR Rockcliffe Parkway. Eminye imigwaqo ebambe iqhaza iseGatineau Park: Gatineau Parkway, Champlain Parkway, naseFortune Lake Parkway.
I-OC Transpo inama-rack ebhayisikile ngaphambili kwamabhasi amaningi. Ungalayisha ibhayisekili lakho ku-rack bese ugibela ibhasi lapho uya khona umgibeli ojwayelekile. I-O-Sitimela izothatha amabhayisekili.
Kuneminyuziyamu eminingi yemibukiso kazwelonke nemipheme e-Ottawa naseGatineau engomakhelwane. Yonke iminyuziyamu e-Ottawa inokuvunyelwa mahhala ngosuku lweCanada, Julayi 1, yize iminyene kakhulu ngaleso sikhathi.
Hlola Inhlokodolobha Yesizwe njengoba bekuhloselwe ukuba ibonwe eduze futhi ngezinyawo. Kunenqwaba yezinkambo ezinhle zokuhamba ukuze wethule endaweni enhloko-dolobha. Ama-Ottawa Walking Tours anikeza ukuhamba okuqondiswa komlando kwedolobha lase-Ottawa ngezindawo ezikhethekile ezindaweni ezibalulekile zomlando. Ihambela izivakashi ezazi ngomlando nangobuciko bomuzi futhi ivumele izivakashi ukuthi zifunde kabanzi ngomlando we-Ottawa, izakhiwo, izinhlamvu zezombusazwe ezimibalabala, kanye nezithombe ezihle kakhulu. Uhambo luhanjiswa unyaka wonke futhi ukubhuka kuyadingeka. I-Haunted Walk of Ottawa inikeza izinkambo ezigxila ekuzitheni okudumile kwe-Ottawa kanye nomlando omnyama. Yizwa izindaba zokuxakeka kwezinye izindawo ezaziwa kakhulu e-Ottawa, kufaka phakathi i-Fairmont Chateau Laurier, iBytown Museum kanye ne-Ottawa Jail Hostel. Imihlahlandlela eqoqiwe ihola izivakashi emigwaqweni yedolobha ngokukhanya kwezibani-umkhathi ofanele ngendaba enhle yesipoko. Uhambo luhamba unyaka wonke, imvula noma kukhanye. Ukubhuka kunconywe ngokuqinile.
Uma ukujabulela ngaphandle, ikakhulukazi uma ungumjikelezi wamabhayisekili, kufanele uvakashele iGatineau Park ngaphesheya komfula usuka e-Ottawa. Amabhayisekili angaqashwa phakathi nezinyanga zasehlobo ekhoneni elisenyakatho-mpumalanga yeChateau Laurier. I-Ottawa nendawo ezungezile iqhayisa nge-170km yemigwaqo egandayiwe yomphakathi lapho ungagijima khona, ibhayisekili, ukuhamba noma i-rollerblade. Uma ufuna indawo ozoqala kuyo, uye emzileni oseduze wamanzi: imigqa egandayiwe iqonde zombili izinhlangothi zoMfula i-Ottawa, iRideau Canal kanye noMfula uRideau. ITrans Canada Trail ingena e-Ottawa ngemiphakathi engaphandle kweCarleton Place naseStittsville, bese ihlangana noMfula i-Ottawa eBrittania Bay (eduzane neCarling Avenue eBayshore Drive). Kulandela umfula u-13 amakhilomitha empumalanga eya ePhalamende Hill, bese uwela ulibangise Quebec ohlangothini, unwebeka ungene nangaphaya kweGatineau Park.
Ebusika, hamba uye e-skating rink enkulu kunazo zonke emhlabeni, umsele weRideau. Skates zingaba ukuqashwa, kanye nokudla okuthengiswayo, kusukela abathengisi ngqo eqhweni. Le futhi indawo enhle yokujabulela “umsila we-beaver” okuyindlela ekhethekile yendawo - okufana nekhekhe le-funnel, okuvame ukujatshulelwa ngalo kalamula noshukela. Ifana kakhulu nenhlama ethosiwe. Uhlelo lwedolobha olusetshenziswayo lusebenza njengohlelo oluhle kakhulu lokuhamba nge-ski, njengoba kwenzeka ne-200km yezitimela ezijwayiwe eziseGatineau Park. Ukushushuluza phansi kuyatholakala ngaphesheya komfula ezindaweni ezintathu eziseduzane: ICamp Fortune (180 m vertical), Edelweiss (200 m vertical) neMont Cascades (165 m vertical).
Ekuqaleni kwentwasahlobo (ngokujwayelekile ngoMashi), lapho amazinga okushisa esasemini engaphezulu kweqhwa futhi amazinga okushisa ebusuku engaphansi kweqhwa, cabanga ngokuvakashela isiraphu yesiraphu yesiraphu emisha. Kuningi okufanele ukhethe kusuka esifundeni uma unemoto ongayikhipha edolobheni.
Ukutholakala khona kanye emngceleni wesifundazwe, izindlela zasemini eziya eQuébec ezingomakhelwane zingenziwa kalula.
IGatineau - Ngaphesheya komfula u-Ottawa. I-Canadian Museum of Civilization enezinga lomhlaba kufanelekile ukuvakashelwa. Ubusuku obumakhelwana e-Old Hull buvame ukubhekwa njengobukhulu kunobuka-Ottawa; ngeziklabhu ezimbalwa ezinomsindo kodwa nokunikela okuhle kwamakhofi wezobuciko onomculo omuhle wasendaweni obukhoma.
I-Wakefield - Idolobha labaculi abahlukahlukene kakhulu eceleni komfula iGatineau. Inothile ngeminikelo yamasiko nendawo enhle yemvelo (ikakhulukazi ekwindla).
I-Aventure Laflèche. Indawo ebabazekayo yalabo abanentshisekelo yemisebenzi yangaphandle eGatineau Hills unyaka wonke. Inkampani engenzi inzuzo eyenzelwe umphakathi enikezela ngemizila emihle yemvelo, izinkambo zemihume yaseLaflèche yomlando, nepaki lesifundazwe elikhulu kunawo wonke lesifundazwe eline-adventurous (lifaka ama-ziplines amaningana). Ukushayela ucingo phambili ukubhuka kunconyelwe kakhulu.
I-Eco-Odyssée. Enye inketho enkulu yabathandi bemvelo abaseduze neWakefield. Imilambo yamanzi emnandi kakhulu yokufunda ngezindawo zemashi ezisendaweni.
IGreater Canadian Bungee yenzelwe ukuthambekela.
Abathandi beJazz neBlues bangakuthola abakufunayo kulamakhalenda omculo we-Ottawa.
I-Ottawa isingathe imikhosi nemicimbi engaphezulu kwe-60 ngonyaka, kufaka phakathi:
I-Ottawa Jazz festival ehlobo.
I-Ottawa International Chamber Music Festival ehlobo, ingenye enkulu kunazo zonke emhlabeni
I-Bluesfest, futhi ehlobo: Umkhosi omkhulu we-blues ku Canada, kanye nomculo we-rock, we-pop nowomhlaba. Izivakashi eziningi zeza e-Ottawa zivela e-Atlantic Canada naseNew England ngqo eBluesfest.
Umkhosi weFringe, omunye umnikelo wasehlobo.
I-Winterlude, ubusika obumnandi obunemifanekiso eqoshwe eqhweni nemidwebo yeqhwa
I-Tulip festival, i-bonanza yasentwasahlobo yezinhlamvu eziqhakaza izimbali, enikezwa minyaka yonke nguhulumeni waseDashi, kanye nochungechunge lwamakhonsathi olunedwala laseCanada elaziwayo namanye amaqembu omculo athandwayo.
IFerrari Festival ngoJuni, kuPreston Street.
Usuku lweCanada, gubha usuku lokuzalwa lwaseCanada e-Ottawa ngoJulayi 1st.
I-Ottawa inezokuzijabulisa eziningi zemidlalo yaseshashalazini. Lokho kufaka phakathi i-National Arts Center (isiNgisi nesiFulentshi), iGreater Canadian Theatre Company, i-Ottawa Little Theatre, neTara Players (yeshashalazi yase-Ireland).
Isikhungo Sikazwelonke Sezobuciko siphinde sinikeze indawo enkulu yoMdanso nokusebenza kwe-Orchestral.
Ama-Pirate Adventurs, umgwaqo ongemuva we-588 hog. NgoJuni-Oct. Joyina iqembu labasiki bengqephu bePirate Adventures yemidlalo yemidlalo yeshashalazi engalibaleki futhi uhamba ngomgwaqo u-Rideau Canal eMooney's Bay. Izingubo zasePiratu, upende wobuso namagama amasha e-pirate wabo bonke njengoba ukaputeni neqembu lakhe bezingela umcebo otshisiwe ngenkathi kuthathwa amapirates amabi! Umnandi wonke umndeni.
Indawo yaseBeWard Market yedolobha i-Ottawa, esempumalanga neRideau Canal kanye neChateau Laurier, iyindawo yesifunda yezitolo ethandwa kakhulu. Ehlobo, izitolo ezithengisa umkhiqizo omusha nezimbali zihamba emigwaqweni, kodwa ngisho nasebusika kukhona abathengisi abaqinile ababopha amakhaza - futhi isiraphu yemaple ethengiwe lapha ibiza uhhafu wentengo yezitolo zezikhumbuzo kwenye indawo edolobheni. Kusihlwa, imakethe iyavalwa futhi izindawo zokudlela zakule ndawo, ama-pubs nemigoqo kuthatha njengokukhangana okuyinhloko, eceleni kwabadlali abaningi basemgwaqweni.
ISpark Street imigwaqo emnandi yabahambi ngezinyawo ibhulokhi yasePhalamende Hill kanye nokuvakasha okujwayelekile ukubona izivakashi. Kulesi sitaladi uzothola iningi lezitolo zabavakashi ezidayisa amakhadi okuthumela, omantshi kanye nesiraphu yemaple. I-Astrolabe Gallery, etholakala kulo mgwaqo, iyisitofu semali samamephu wasendulo kanye nemaphosta wevintage. Kunezindawo zokudlela ezinhle zokudlela eziningi zokudlela zangaphandle nezindawo zokudlela ongazikhetha kuzo futhi.
IDolobha laseWestboro. Eminyakeni yamuva nje lapho umgwaqo uRichmond Road usondele entshonalanga ye-Ottawa usuka eGolden Avenue uya empumalanga uye eTweedsmuir Avenue useyindawo yezokuvakasha edumile nezindawo zokuthenga, futhi ufaka izitolo ezimbalwa zangaphandle (zokugqoka nemishini), izindawo zokudlela nezindawo zekhofi.
NgoMgqibelo wokugcina ngoMeyi, umakhelwane weGlebe wase-Ottawa uphethe iGreat Glebe Garage yonyaka. Amakhulu amatafula wokusetha abahlali emagaraji noma emaphepheni awo futhi athengise izimpahla ezisetshenzisiwe ezisukela ezindlini knick-knacks kuya kuma-elekthronikhi kuya kwezingubo. Amabhizinisi akule ndawo abamba nokuthengisa eceleni kwendlela, futhi abathengisi bathengisa ubuciko, ukubhaka nezinto zokuzivuselela. Ukushayela nokupaka ngesikhathi sokuthengisa akunasidingo futhi cishe akunakwenzeka. Fika ngezinyawo noma epaki bese ungena komakhelwane. Ngokupaka, kanye nokuthengiswa okuhle kakhulu (ikakhulukazi ezintweni ezinkulu njengefenisha), fika ngaphambi kwesikhathi. Umcimbi uphithizela yi8 AM kodwa uyaqhubeka kuze kube ntambama. Abathengisi bayakhuthazwa ukuthi banikele ngengxenye yemali yabo kwi-Ottawa Food Bank.
Ukudla kwezinhlanga ezivela emhlabeni wonke kuyatholakala ezindaweni zokudlela eziningi nabathengisi basemgwaqweni kulo lonke idolobha. Indawo yemakethe yeByWard inokhetho olubanzi lokudla okuhlukahlukene; indawo yaseChinatown iseceleni kweSomerset Ave. phakathi kweBronson Ave. kanye nePreston St; ILittle Little ligijimisana nobude bePreston Street, ukusuka eCarling Avenue kuya ku-Albert Street.
Zama futhi i-BeaverTail emnandi, inhlama ebosiwe, enosiwe ejulile ne-Ottawa, yize kunezindawo eziningi ezithi ziyenzile. Iyatholakala ngohlobo olumnandi noluswelayo, olunamathiselwe ngesinamoni, ushukela, icing ushukela, njll ebusika, izindawo eziningi zizowunikeza umsele. Kunezinhlobonhlobo zezindawo eziphezulu kanye nokunambitheka komsila we-beaver kuphakama ngokugqamile noshukela we-classic nesinamoni. Kodwa-ke, okuthandwa yindawo yi-Killaloe Sunrise, ukuphonsa ushukela wesinamoni kanye nojusi kalamula.
Izitolo Zekhofi zitholakala kulo lonke idolobha.
Ukudla okuhle kakhulu okungeyona okwaseCanada, behlela phansi eSomerset Street West eduze kwaseBronson enhliziyweni yeChinatown. Lapha unokukhetha izindawo zamaVietnam, isiThai, isiCantonese, njll. Omunye umthombo omuhle wokudla kwezinhlanga ukweluka eRideau phakathi kweKing Edward nebhuloho eliya eVanier. Ungathola ukudla kwase-Middle East, e-Afrika nase-Asia lapho.
Kungenzeka ukuthi i-Ottawa inezindawo zokudlela zama-shawarma ne-falafel ukwedlula noma iyiphi enye indawo eMhlabeni (ngaphandle kwe-Arab World, kunjalo) futhi iningi labo lizokhonza i-shawarma enhle cishe i-5 yamaRandi. Izikhathi zabo ezimatasa zivame ukuba phakathi kwamasonto ngehora lesikhathi sasemini, nangezimpelasonto ngemuva kokuvalwa kwemigoqo. IMakethe kanye ne-Elgin St. bobabili banezindawo zokudlela eziningi nezindawo zokudla abangazikhetha kuzo. Uhla olujwayelekile lokudla, izitolo ze-bagel nezindawo zokudlela ezisheshayo zingatholakala ezindaweni zokuthenga kulo lonke idolobha.
Futhi uzothola "izinqola zama-chip" noma "amaloli we-chip" emiswe ezindaweni ezahlukahlukene eziseduzane nedolobha ngesikhathi sasemini. Bakhonza ama-hamburger, izinja ezishisayo, amasoseji, i-pogos (okuthosiwe ngokujulile, izinja ezishisayo ngentonga), ama-tiles (ama-fries ama-french) ne-poutine (ama-french fries ambozwe ushizi we-cheddar kanye ne-gravy - ithandwa kakhulu eQuebec nasempumalanga ye-Ontario). Ngenyanga yehlobo, amaloli wokudla we-upscale nawo abukeka, elandela ukuqubuka kwamanye amadolobha aseNyakatho Melika.
Izindawo ezaziwa kakhulu ngamabha ziseMakethe yeByWard, kanye naseWellington Avenue eWestboro kanye naku-Elgin Street nakuBank Street phakathi kweSomerset neGladstone endaweni yaseCentretown. Kukhona ama-pubs nemigoqo ehlakazekile kulo lonke idolobha.
Ungathatha futhi uhambo oluncane phezu komfula i-Ottawa uye eGatineau. Amabha ohlangothini lwe-Ottawa eduze nase-2: 00 AM, yize isifundazwe saseQuébec sinezingcingo zokugcina ze3: 00 AM, okuhlukile kwenziwa eGatineau lapho imigoqo ibuye futhi eduze nase2: 00 AM.
Qaphela ukuthi ukubhema akuvunyelwe e-Ontario noma e-Quebec zokudlela nasemigoqweni. Umthetho omusha, oqale ukusebenza e2012, nawo uvimbela ukubhema emaphaketheni emigoqo e-Ottawa.
Kusukela maphakathi ne-1990's kube khona ukuqhuma kwezindawo zokushicilela zase-Ireland- / eBrithani kulo lonke idolobha.
Amakhodi endawo e-Ottawa yi-613 nekhodi yokumbondela i-343. Ukudayela okuyizinombolo eziyishumi (inombolo yendawo + inombolo yendawo) kuyadingeka kuwo wonke amakholi endawo.
I-Ottawa yindawo ephephe kakhulu yokuhlala nokuvakasha, ngakho-ke uma usebenzisa umqondo ojwayelekile okungenani iphephe njenganoma yimuphi omunye idolobha. Kunabavakashi abaningi kuleli dolobha, ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo, futhi zimbalwa kakhulu izigameko zokubanjwa kwabantu noma ukuhlaselwa.
Sebenzisa ukuqonda okujwayelekile, ikakhulukazi lapho ugibela ebusuku, zonke iziteshi zokuhamba zinamabhokisi amaningi okushayela abezimo eziphuthumayo. Ngemuva kobumnyama, nakekela ngokwengeziwe ezindaweni eziseduzane nedolobha njengeLowertown, kanye neHintonburg, Vanier, Bayshore, Ledbury, Heatherington, iCaldwell neSouth Keys. Le ndawo ezaziwa ngokuthi zinobukhona beqembu lezigilamkhuba, kanye nezinkinga zezidakamizwa. I-Ottawa ngokuvamile iphephile kakhulu, kepha njenganoma yimuphi omunye umuzi inama-apula amabi.
Futhi, i-Ottawa inenkinga edume kabi yokungabi namakhaya, ikakhulukazi endaweni yaseRideau Street. Ama-Panhandlers ajwayele ukuhlonipha futhi akayona nolaka.
Ngaphesheya komfula usuka e-Ottawa kuneGatineau, enendawo enhle kakhulu yaseCanada Museum of Civilization kanye nezinye izindawo zokudlela ezinhle kakhulu. Kunepaki lomhlaba lonke elihle elinegama elifanayo nje enyakatho-nentshonalanga, linamawa amakhulu futhi amachibi acwebile acacile. Kule ndawo kulele:
I-Wakefield, i-30-45 min ngemoto ngasenyakatho ye-Ottawa, idolobhana elihle eMfuleni iGatineau eGatineau Hills. Ngasohlangothini lomfula iQuebec kodwa kukhulunywa kakhulu isiNgisi.
Ngaseningizimu-empumalanga ye-Ottawa indawo enkulu yasemakhaya eyisicaba ehlanganisa iningi lamadolobhana amancane, amadolobhana ezolimo, kanye nehlathi ngezikhathi ezithile. Le ndawo ephansi igcwele izifunda eziyisishiyagalombili futhi ifinyelela yonke indlela eya
nomngcele wase-United States, amakhilomitha angamakhilomitha kude. Kule ndawo yezolimo kulele:
IMerrickville, i-45 min ngemoto eseningizimu ye-Ottawa, ithi iyidolobhana laseCanada elihle kunazo zonke.
I-Perth, ihora le-1 ngaseningizimu, idolobha elihle kakhulu elinamamayela, nezakhiwo zamagugu.
I-Carp, idolobhana elincane le-10 km enyakatho ye-Ottawa, inendawo eyaziwa ngokuthi yi-Cold War "I-Central Emergency Government Headquarters" (Diefenbunker), manje eseyimnyuziyamu.
Ngasentshonalanga ye-Ottawa kukhona indawo enamazinga amade. IMadawaska Highlands, eqala cishe i-90km isenyakatho nentshonalanga, iyindawo ehlane enabantu abangamakhilomitha amaningi amachibi amachibi namahlathi. Kule ndawo kulele:
IGreater Madawaska, i-Calabogie Ski resort cishe ngehora le-1 1 / 2 entshonalanga ye-Ottawa.
Enyakatho ye-Ottawa kukhona iRenfrew County, inhliziyo yalokho okwaziwa kakhulu njenge-Ottawa Valley. Yize i-Ottawa isendaweni yesigodi esifundeni sase-Ottawa, njengegama elisetshenziselwa ukubhekisisa isetshenziselwa ukubhekisa esifundeni esenyakatho ne-Ottawa.
Montreal, idolobha elikhulu kunawo wonke Quebec, yi-200km empumalanga. Idolobha elikhulu kunawo wonke elikhuluma isiFulentshi ngaphandle kweYurophu.
Toronto, Idolobha elikhulu kunawo wonke eCanada, cishe i-500km eningizimu-ntshonalanga.
UKingston, cishe nge200km eningizimu-ntshonalanga, indlela eya eToronto. Idolobha elidala elihlanganiswe nezakhiwo zamatshe olwandle kanye nasekhaya e-Queen's University, kwesinye CanadaAmanyuvesi adume kakhulu.